Naledi Pandor Archives - Zimbabwe Voice
FUGITIVE Malawian prophet Shepherd Bushiri and his wife, Mary, were issued with diplomatic passports bearing decoy names and applied with cosmetic facial changes before being smuggled out of South Africa in Malawian President Lazarus Chakwera’s hired jet, sources said. Several insiders in the government’s security cluster – including diplomatic and military intelligence sources, police officers, and bureaucrats – told the…
SOUTH Africa’s International Relations Minister Naledi Pandor has said the South African government can only mediate in Zimbabwe if the Zimbabwean government, not the opposition, asks for such intervention. Pandor had been asked by SABC’s Sherwin Bryce-Pease why South Africa was comfortable speaking up about the human rights situations in places like Western Sahara or Palestine but not Zimbabwe when…
The South African government remains determined to help resolve the crisis in Zimbabwe, despite governing party Zanu-PF’s dismissal of mediation efforts by the ANC and Pretoria. “Zimbabwe is important. We continue to engage Zimbabwe and we will continue to do so until we help come out of the problem, crisis, challenges, whatever you prefer to use, until we achieve an…